Izindaba - Isitifiketi
I-KingTai Inkampani ingumkhiqizi ophelele wokuhweba ohlanganisa ukukhiqizwa nokuthengiswa.Sinayo ithimba lethu lefektri nelaphesheya kwezentengiso, ifektri yethu itholakala eHui Zhou City Province yaseGuangdong Kusukela yasungulwa, inkampani ithole izitifiketi ezingaphezu kuka-30 namalungelo obunikazi kufaka phakathi iWal- IMart, iDisney, i-Universal Studios, i-FDA ne-ISO90001.
IHarry Potter, i-Universal Studios neDisney ngamakhasimende ebesisebenzisana nawo selokhu kwasungulwa. Sihlala sinikeza insizakalo enhle kumakhasimende ngokuya ngekhwalithi nesikhathi sokulethwa, okuyisiqondiso futhi inkampani yethu ebisebenza kanzima ngaso.Ngaso leso sikhathi, ngenkathi sisebenza noWal-Mart sathola isitifiketi se-FDA e-United States .
Mayelana ne-FDA, Sisebenzisane noWal-Mart ukukala umkhiqizo we-spoon futhi sathola isitifiketi, ngakho-ke umkhiqizo wethu wesipuni unesiqinisekiso sokuphepha.Ungathenga ngokuzethemba.Singanikeza izitifiketi zereferensi yakho uma uzidinga. isipuni, sinesitayela esiningi esingakhethwa, kepha uma unomklamo womnikazi wakho kulungile, ama-pls angibonise umklamo wakho noma umphumela we-3D esingakwazi ukuwubheka, futhi sikunikeze inani.
Ngokuthuthuka kwesikhathi eside, sicela usazise uma imakethe yakho idinga ezinye izitifiketi.Sizokunikeza isikhathi sokuhlola ngokuya ngesidingo somkhiqizo, ukuze sikwazi ukuvula imakethe enkulu.Singakunikeza umkhiqizo ukuze wenze Umbiko wokuhlola, ngasikhathi sinye, sinombiko wokuhlola wamanye amakhasimende ongabelana nawo uma udinga.Nokho, izithako zemikhiqizo ehlukile zihlukile, kanjalo nayo yonke imiphumela yokuhlolwa. Imiphumela yokuhlolwa yamanye amakhasimende ingasetshenziswa kuphela njengamanani ayizethenjwa.Ukubheka ukwakhiwa kwephrojekthi, siphakamisa ukuthi kunikezwe amasampula wombiko wakho wokuhlola.Ngithemba ukuthi uyaqonda.Uma unanoma yikuphi ukwamukelwa kophenyo ukuze uxhumane nathi nganoma yisiphi isikhathi.Silinde kwakho.